Lilt: Baadhitaan Jawaab celin Mashiin ah oo Bini'aadam ah + Loogu talagalay Turjumaadda iyo Dejinta | Martech Zone
Lilt: Baadhitaan Jawaab celin Mashiin ah oo Bini-aadam ah oo loogu talagalay Tarjumaadda iyo Dejinta
Khamiista, Noofembar 2, 2017 Khamiista, Noofembar 2, 2017 Douglas Karr
Dabaal wuxuu dhisay bini'aadamka neerfaha ugu horeeya + wareejinta jawaab celinta mashiinka tarjumaadda. Lilt's tarjumaadda mashiinka neerfaha Nidaamka (NMT) waa kii ugu horreeyay noociisa ee warshadaha tiknoolajiyada tarjumaadda wuxuuna ka gudbaa wixii laga helo Google, Amazon, Facebook, Apple, ama Microsoft. Ganacsatada doonaya inay ballaariyaan gaadhitaankooda adduunka hadda waxay leeyihiin ikhtiyaar wanaagsan oo ay ugu turjumaan waxyaabaha ay ka kooban yihiin si dhakhso leh oo sax ah.
Marka laga hadlayo turjumaadda, ganacsiyada waxay lahaayeen laba ikhtiyaar oo keliya:
Xukun-buuxa turjumaadda mashiinka sida Google Translate.
Lilt wuxuu awood u siinayaa sida ugu fiican labada adduunba iyadoo la isku darayo sirdoonka macmalka ah iyo awoodda aadanaha si loo helo tayada tarjumaadda ugu fiican ee la heli karo. Nidaamka NMT ee Lilt wuxuu adeegsadaa isla tiknoolajiyadda neerfaha ee horay loogu isticmaalay in lagu hormariyo hadalka iyo aqoonsiga sawirka, laakiin saameynta ay ku leedahay warshadaha tarjumaadda ayaa ah mid cusub oo rajo leh. Bilihii la soo dhaafay, NMT waxaa ku ammaanay khubarada warshadaha awooddeeda inay la mid noqoto tayada tarjumaadda aadanaha iyo nidaamka cusub ee Lilt isna kama reeban.
Qeybta jawaab celinta neerfaha ee 'Lilt', tarjumaanada waxay helayaan talo soo jeedin ku saleysan macnaha NMT inta ay shaqeynayaan. Nidaamka NMT wuxuu si tartiib tartiib ah u kormeeraa dookhyada turjubaanka si uu ula qabsado soo jeedintiisa waqtiga dhabta ah. Tani waxay abuureysaa wareeg wanaagsan oo ay tarjumaanadu ku helayaan talooyin si ka sii fiican u sii kordhaya, makiinaduna ay hesho jawaab celin sii kordheysa oo ka wanaagsan. Wareegga jawaab celinta neerfaha wuxuu keenaa tayo sarreysa aadanaha iyo tarjumaadda mashiinka, taas oo ka caawisa ganacsiyada inay u adeegaan macaamiil badan, in ay yareeyaan qiimaha, isla markaana ay gaabin waqtiga-suuqa. Lilt qiimahiisu waa 50% ka yar waana ka dhakhso badan yahay 3-5 jeer.
Barxadda Lilt waxay bixisaa waxyaabaha soo socda:
Marnaba Dib Ha U Tababbarin Nidaamyada MT - Nidaamka tarjumaadda mashiinka la-qabsiga ee Lilt wuxuu cusbooneysiiyaa xusuusta tarjumaadda iyo nidaamka MT wax ka yar hal sekan markasta oo uu turjumaan xaqiijiyo qeyb.
Isku xirnaanta bilaa-aadanka Aadanaha iyo Mashiinnada - Ku dhex milmaan tarjumaadda aadanaha iyo mashiinka nidaamyada kale ee shirkadaha iyada oo loo marayo heer ku saleysan API. Ama isticmaal mid ka mid ah liistada sii kordheysa ee isku xirayaasha caadooyinka.
Maareynta mashruuca agile - Mashruuca Mashruuca Kanban wuxuu kuu ogolaanayaa inaad aragto heerka ay haatan ku sugan yihiin kooxdaada mashaariicdeeda iyo shaqada tarjumaadda.
Daraasad isbarbardhig indho la'aan ah oo ay samaysay Zendesk, turjubaano ayaa la waydiiyay inay kala doortaan Lilt tarjumaadaha cusub ee la qabsiga ee NMT iyo nidaamka tarjumaadda mashiinka la qabsiga hore ee MT ee Lilt. Isticmaalayaasha waxay u doorteen NMT inay ahaadaan kuwo isku mid ah ama ka tayo sareeya tarjumaadihii hore 71% waqtiga.
Waxaan jecel nahay xiriirka ka dhexeeya tarjumaha aadanaha iyo awoodooda inay ku tababaraan matooradeena MT. Waxay ula jeedday markii aan sameynay maalgashi tarjumaadaha aadanaha, waxay sidoo kale gacan ka geysan doontaa tayada matooradeena MT. Melissa Burch, maareeyaha taageerada khadka tooska ah ee shirkadda Zendesk
Aasaasayaasha Lilt John DeNero iyo Spence Green ayaa la kulmay iyagoo ka shaqeynaya Google Translate sanadkii 2011, waxayna bilaabeen Lilt horaantii 2015 si ay ugu keenaan tikniyoolajiyadda ganacsiyada casriga ah iyo turjumayaasha. Lilt wuxuu bixiyaa xalka ganacsiga iyo tarjumaadda ecommerce sidoo kale.
Tags: tarjumaadda aadanahalillingoobtadegaankabarashada mashiinkaturjumaadda mashiinkaneuraltarjumaadda mashiinka neerfahashabakada neuraladatarjumaadamashruuca turjumaadazendesk
Astaamahaaga Bilaabashadu Diyaar ma u yihiin CES? Liiska hubinta ee Astaamaha Aasaasiga u ah Muddada Koowaad
Waxaan Tijaabinayaa Kordhinta Cusub ee Twitter